Tuesday July 17, 2018 - 18:00:01 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymo bahalnimo ay markale ka dhaceen gobollo dhaca koonfurta,bartamaha iyo bariga wadankaas, ugu yaraan 10 qof oo dhammaantood ah haween iyo carruur ayaa ku dhintay dqeymo lala beegsaday iskuul
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymo bahalnimo ay markale ka dhaceen gobollo dhaca koonfurta,bartamaha iyo bariga wadankaas, ugu yaraan 10 qof oo dhammaantood ah haween iyo carruur ayaa ku dhintay dqeymo lala beegsaday iskuul kuyaal gobolka alquneydarah.
Duqeymahan oo ay geysteen diyaaradaha dowladda Ruushka ayaa ka dhacay tuulo dad barakacayaal ah deganyihiin oo lagu magacaabo ceynu teynah, dad ka badbaaday duqeymaha ayaa warbaahinta u sheegay in meydadka carruurta lalaayay qaar badan oo kamid ah ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa waxaana jira dad dhaawacyo ah oo iyana ku hoos xaniban burburka guryaha.
Gobollada darcaa iyo alquneydarah muddo ku dhow bil waxaa ka socda guluf dagaaleed ay ciidamada nidaamka bishaar al-asad iyo maleeshiyaad shiico rawaafid ah ku doonayaan in ay ku qabsaan dhulalka muslimiinta sunniga ah.
dhinaca kale diyaaradaha dagaalka nidaamka nuseyriga ayaa duqeymo cadawtooyo ka geystay degmooyin katirsan gobolka xammaah ee dhaca bartamaha suuriya, deegaannada macardas iyo al-ladaamiyah ayaa lakulmay duqeymo baahsan.
Ragga firfircoon ee soo tabiya dagaalka suuriya ayaa sheegay in duqeymahan baahsan uu cadawgu uga gol-leeyahay in uu weerar dhanka barriga ah ku qaado bandiqadda, khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegay in ay ka dhasheen duqeymaha ka dhacay gobolka Darcaa.
dhanka gobolka deyruzuur ee bariga suuriya dhaca ugu yaraan 8 qof shacab ah ayaa dhintay kadib markii diyaaradaha isbaheysiga mareykanku hoggaaminayo ay duqeeyeen tuulo ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah baadiyaha bari ee gobolka, sidoo kale meydadka 250 qof shacab ah ayaa lagasoo saaray xabaal wadareed kuyaal magaalada Raqqa.
Meydadkan ayaa ah dad shacab ah oo isbaheysiga saliibiga ah uu duqeymo ku dilay, odayaasha gobolka raaqa waxay warbaahinta u sheegeen in maleeshiyaadka malaaxidada kuridiyiinta ay qeyb ka ahaayeen xasuuqa wadareedka ka dhacay raqqa waxaana meydadka laga helay xabaad wadareed si qarsoodi ah uga qodkaa halka loo yaqaan beerta xawaanaadka raqqa